Ukubambisana Ngokubambisana ne-Google Spreadsheet | Martech Zone
NgoMsombuluko, Julayi 10, 2006 NgoLwesibili, ngoJulayi 4, i-2017 Douglas Karr
Ngixhumane neChamber of Commerce yendawo kusihlwa ukuze sixoxe ngokuvuselelwa kobulungu. IChamber iyinhlangano enhle, kepha iyisibonelo esihle senkonzo lapho ukuvuselelwa kuyisifo senhliziyo senhlangano. Ngiyaqiniseka impela ukuthi iChamber mhlawumbe lilahlekelwa yimali kubantu abajoyina unyaka wokuqala. Kodwa-ke, ngemuva kwalowo nyaka, inzuzo yabo iyakhuphuka - futhi inani leLungu leChamber alikaze lehle.
Namuhla ebusuku ngikhulume nozakwethu, UDarrin Mpunga, ukuthi singabeka kanjani kalula indawo esisebenzisana nayo lapho amalungu asiza ngokuvuselelwa angalandelela ukuxhumana kwawo namalungu amasha noma amalungu angaba sengozini. Sikhulume ngokwakha iwebhusayithi - into ezodinga izinkulungwane ezimbalwa zamaRandi namasonto ambalwa ukuqeda. UDarrin wafuna isixazululo esingcono futhi ekugcineni washo…
Voila! AmaSpredishithi e-Google. Umngani wami, uDale, wabelane nami ngespredishithi emasontweni ambalwa edlule futhi ngamkhumbula ethi angihlole. Kuthathe kuze kube namhlanje kusihlwa, kepha ngenzile futhi kuhle. Ngemuva kokugcina ispredishithi sakho, unethuba lokumema abantu ukuthi bahlele noma babuke ispredishithi.
Ngingeze isiphakamiso seGoogle sokulawulwa kwenguqulo (ukulengisa i-nitwit esusa yonke imigqa ngengozi), kanye nezimvume zezinga leSpredishithi. Kulokhu, singakha ishidi lelungu ngalinye elisizayo ukulandelela amalungu alo abelwe engcupheni.
Yeka ithuluzi elihle, noma kunjalo! Ngicabanga ukuthi kuzosebenza. Mina noDarrin besisiza iChamber ukuthi ihlaziye amabhizinisi abo ngokuhlaziya okuthile kokubikezela okulindelekile eminyakeni emibili edlule. Ngonyaka odlule, ngenze i-Z-Score ephathelene ne-SIC, Iminyaka Ebhizinisini, Inani Labasebenzi, kanye ne-Total Sales Volume. Lokhu kusivumele ukuthi sibuyekeze futhi sidonse i-1/10 ngamathemba amaqembu abo okuthengisa ukuthi axhumane nawo. Imiphumela yomkhankaso ibingaphezu kwesilinganiso, kepha siguqula imodeli ukwenza ngcono imiphumela kulo nyaka.
Tags: i-brandirectigumbii-Chamber of Commerceu-darrin mpungaI-Google SpreadsheetsUkulindelaukukhishwa kwe-telemarketing